Gudiga anshaxa ee ururka kooxaha France oo ganaax dul dhigay Kylian Mbappé – Gool FM
Gudiga anshaxa ee ururka kooxaha France oo ganaax dul dhigay Kylian Mbappé
(PSG) 05 Sab 2018. Gudiga anshaxa ee ururka kooxaha Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in weeraryahanka kooxda PSG ee Kylian Mbappé uu mari doono ganaax 3 kulan ah, kadib markii uu qaatay kaarka roosaha ee toos ah kulankii ugu dambeeyay ay ka ciyaareen horyaalka dalka France.
Weeraryahanka kooxda PSG ee Kylian Mbappé ayaa seegi doona saddexda kulan horyaalka France Ligue 1 ee kala ah Saint-Étienne, Rennais iyo Reims ee la ciyaari doono 14, 23 iyo 26 ee bishan Sebtembar.
Maqnaanshiyaha Kylian Mbappé ee kulanka Saint-Étienne ayaa waxay dhibaato xoogan ku noqon doontaa tababare Thomas Tuchel, maadaama ay Liverpool afar maalmood kadib kaga hor imaan doonaan tartanka Champions League.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in arintan ay saameyn xoogan ku yeelan karto diyaar garowga Kylian Mbappé kulanka Liverpool ee Champions League.
Liverpool oo wadahadal la furtay Adrien Rabiot si ay qaab bilaash ah ugu hesho
Barcelona oo sheegtay in Messi uusan u baahneen ku guuleysiga abaal marin si uu u xaqiijiyo inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican aduunka